မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Tetanus vaccine)သည် မေးခိုင်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး တီတီ (tetanus toxoid TT)ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ကလေးဘဝတွင် အားလုံးပေါင်း(၅)ကြိမ်ထိုးသင့်ပြီး နောက်(၁၀)နှစ်ကြာတိုင်း နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်ဆင့်ထိုးသင့်သည်။ (၃)ကြိမ်ထိုးပြီးပါက အပြည့်နီးပါး ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြည့်စုံစွာမထိုးခဲ့ပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး (၄၈)နာရီအတိုင်းတွင် အပိုဆောင်းထိုးသင့်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြေများသော်လည်း ခုခံအားအပြည့်မရရှိသေးသောလူများကို မေးခိုင်အဆိပ်ဖြေဆေး ထိုးပေးလျှင်လည်းရသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများသည် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးကို ပြည့်စုံအောင်ထိုးထားရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက မွေးလာသောကလေးတွင် မွေးကင်းစမေးခိုင်ရောဂါဖြစ်တတ်သည်။
မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများနှင့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV)/ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ကူးစက်ခံနေရသောသူများအတွက်ပါ စိတ်ချရသော ဆေးဖြစ်သည်။ လူပေါင်း (၂၅-၈၅)ရာခိုင်နှုန်းတွင် ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နီရဲခြင်းနှင့် နာကျဉ်ခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ တစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင်သာ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် ကြွက်သားများ အနည်းငယ်နာကျဉ်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ လူပေါင်းတစ်သိန်းတွင် တစ်ယောက်ခန့်သာ ပြင်းထန်သော ဆေးမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တတ်သည်။
မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အခြားကာကွယ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်၍ ထုတ်လုပ်လေ့ရှိသည်။ သုံးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး (DTaP နှင့် Tdap)တွင် ဆုံဆို့၊ မေးခိုင်နှင့် ကြက်ညှာတို့ ပါဝင်ပြီး နှစ်မျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး (DT နှင့် Td)တွင် ဆုံဆို့နှင့် မေးခိုင်တို့ ပါဝင်သည်။ DTaP နှင့် DT ကာကွယ်ဆေးကို အသက်(၇)နှစ်အောက်ကလေးများကို ထိုးပေးပြီး Tdap နှင့် Td ကာကွယ်ဆေးကို (၇)နှစ်နှင့် (၇)နှစ်အထက်ကလေးများကို ထိုးပေးလေ့ရှိသည်။ စာလုံးအသေးdနှင့် p သည် ဆုံဆို့နှင့် ကြက်ညှာကာကွယ်ဆေးများ၏ အာနိသင်နည်းပါးကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။
မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၂၇)ခုနှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၁၉၄၀)ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ စတင်ရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မေးခိုင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်အရ လက်ကားဈေးမှာ (ဝ.၁၇-ဝ.၆၅)ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၂၅-၅၀)ဒေါ်လာခန့် ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ "Tetanus vaccine: WHO position paper" (May 19, 2006). Weekly epidemiological record 20 (81): 197–208.
↑ Puncture wounds: First aid (Feb 4, 2015)။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Vaccines: VPD-VAC/Tetanus/main page။ Centers for Disease Control။ February 10, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Macera၊ Caroline (2012)။ Introduction to Epidemiology: Distribution and Determinants of Disease။ Nelson Education။ p. 251။ ISBN 9781285687148။
↑ Vaccine, Tetanus Toxoid။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=293076" မှ ရယူရန်